Warshadda Xirmooyinka Sawirka Sawirka ee PVC ee PVC iyo soo -saareyaasha | SJJ
Jidhka Sawirka PVC ee jilicsan waa aalad cajiib ah oo lagu muujiyo noloshaada quruxda badan maahan kaliya gurigaaga ama miiskaaga, laakiin sidoo kale waqtiyada kale sida bandhigga ama bandhigga. Waxaa lagu sameeyaa walxo PVC oo jilicsan, kuwaas oo dhaqaale iyo deegaan leh. Dabeecadda waarta waxay ka caawisaa ilaalinta sawirrada, ma jebin sida g ...
Jidhka Sawirka PVC ee jilicsan waa aalad cajiib ah oo lagu muujiyo noloshaada quruxda badan maahan kaliya gurigaaga ama miiskaaga, laakiin sidoo kale waqtiyada kale sida bandhigga ama bandhigga. Waxaa lagu sameeyaa walxo PVC oo jilicsan, kuwaas oo dhaqaale iyo deegaan leh. Sifada waarta waxay caawisaa in la ilaaliyo sawirrada, oo aan la jebin sida galaaska. PVC-ga jilicsanna waa biyo-diid si loo ilaaliyo sawirrada. Waxaa la isticmaali karaa waqti dheer, looma baahna in si isdaba -joog ah loo beddelo, ma aha oo kaliya in la yeesho dhammaan noocyada qaababka iyo midabada, astaamaha sidoo kale waa la naqshadeyn karaa. Calaamadaha 2D ama 3D waxaa lagu samayn karaa isla shaygan, faahfaahinta cabbirkuna adiga ayay kugu xiran tahay. Dejinta naqshaduhu aad bay ugu roon yihiin waqtiga casriga ah, xirmaduna way kala duwanaan kartaa si loo ilaaliyo muraayadaha. Iyada oo ku lifaaqan taageero dhinacyo kala duwan leh, Xirmooyinka Sawirka ee PVC waxay muujinayaan dhinacyo kala duwan oo sawirrada ah. Waxaan awoodnaa inaan soo saarno alaabada leh tayo sare leh waqtiga wax soo saarka gaaban.
Midabada: Waxay la mid noqon kartaa midabka PMS
Dhammaystirka: midabka leh sida aad u baahan tahay
Ikhtiyaarrada Lifaaqa Guud: Haystaha alwaaxa, haysta PVC, kuma xirna dhabarka, jillaab iyo iwm.
Hore: Furfurayaasha Dhalooyinka PVC ee jilicsan
Xiga: Silsilado gacmeedyo iyo jijimooyin PVC ah oo jilicsan
Halxiraalaha Hal -abuurka ah